IHarmonoid, isidlali somculo wasekhaya okanye kwiYouTube | Ubunlog
IHarmonoid, isidlali somculo wasekhaya okanye kwiYouTube
UDamien A. | 28/09/2021 14:14 | Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iHarmonoid. Yi le isidlali somculo esivulekileyo nesivulekileyo, esinokuyifumana ifumaneka kwiGnu / Linux, Windows kunye ne-Android. Inkqubo iya kusivumela ukuba sidlale iifayile zeaudiyo zasekhaya kunye nomculo we-YouTube. Kubhaliwe kusetyenziswa Imijukujelwa kwaye ikhutshwa phantsi kwe-GNU General Public License v3.0.
Lo ngumdlali oza naye Iingoma ezibuyisayo Ukujonga iingoma zomculo, inenkxaso kuhlu lwadlalwayo kunye nokudityaniswa kweNgxoxo. Ukongeza iKuquka i-metadata injini eyakhelweyo, nesalathiso seefayile zethu zomculo. Le njini isekwe kwithegi.
1 Iimpawu eziqhelekileyo zeHarmonoid
2 Faka iHarmonoid kwi-Ubuntu
2.1 Sebenzisa iphakheji ye-DEB
2.2 Sebenzisa iphakheji yePlppak
2.3 Njenge AppImage
Iimpawu eziqhelekileyo zeHarmonoid
Inkqubo ine Injini yemethadatha enamandla, eya kuthi ikhombise wonke umculo wethu ngokusekwe kwiithegi ezifakiwe.
Uya kusinika ithuba lokuba Umdibaniso wediski, ukuze sikwazi ukwabelana nabahlobo bethu oko sikuvayo.
Inkqubo iya kusivumela dlala umculo wasekhaya okanye umculo we-Youtube.
Iya kusivumela ukuba sidlale umculo we-YouTube ngqo ngekhonkco, okanye siya kuba nethuba lokuqhuba uphando kwinkqubo. Umculo we-YouTube kufuneka ubekhona kwilizwe lethu.
Akhawunti ujongano oluhle, eya kuthi ibonelele ngamava omsebenzisi afanelekileyo.
Inkqubo iya kusivumela mamela umculo wethu owuthandayo ngaphandle kwentengiso.
Siya kuba nayo Ukufunyanwa kwakhona kweLirics ukufumana amazwi yawo wonke umculo wethu.
Iya kusivumela ukuba senze uluhlu lokudlala umculo wethu.
Vula Umnikezi, iyafumaneka kwi-Gnu / Linux, Windows kunye ne-Android.
Sinako yenza ngokwezifiso inkqubo ngokumisela imibala kunye nemixholo oyithandayo.
Ezi zezinye zeempawu zenkqubo. Kubasebenzisi abanomdla, baya kuba nakho ukubabonisana bonke ngokweenkcukacha ezivela kwi Indawo yokugcina kwiGitHub yeprojekthi.
Faka iHarmonoid kwi-Ubuntu
Sebenzisa iphakheji ye-DEB
Ukukhuphela iphakheji ye-DEB yale nkqubo, sinako yiya kwi iphepha lokukhupha Iprojekthi kunye nesikhangeli sethu sewebhu. Siya kuba nethuba lokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokusetyenziswa wget ngolu hlobo lulandelayo ukukhuphela iphakheji:
Xa ukhuphelo lugqityiwe, kwisiphelo esinye kuya kufuneka sisebenzise oku kulandelayo faka umyalelo:
Emva kofakelo sinako fumana isiqalisi senkqubo kwiqela lethu.
ukuba susa le nkqubo kwinkqubo yethuKuya kufuneka sivule kuphela i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye senze lo myalelo:
Sebenzisa iphakheji yePlppak
Ngaphambi kokuqala ufakelo, ukuba awunayo le teknoloji ifakwe kwikhompyuter yakho kwaye usebenzisa Ubuntu 20.04, ungaqhubeka Isikhokelo ukuba ugxa wakhe wabhala kule bhlog malunga nayo.
Xa unokufaka iipakeji FlatpakKwisiphelo (Ctrl + Alt + T) kufuneka kuphela sebenzisa umyalelo wokufaka weHarmonoid:
Xa ugqibile, sinako vula inkqubo ukukhangela umthumeli wayo kwikhompyuter yethu okanye ngokuchwetheza kwisiphelo somyalelo:
ukuba susa le nkqubo ifakelwe njengephakepak packageKuyimfuneko ukuvula isiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kwaye wenze umthetho kuyo:
IHarmonoid ikwafumaneka kwi-AppImage package. Le phakheji Singayifumana ifumaneka ukukhuphela kwifayile ye- iphepha lokukhupha yeprojekthi. Ukongeza, sinokubamba le phakheji ngokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokwenza kuyo wget ngoku Landelayo:
Xa ukhuphelo lugqityiwe, kuya kufuneka siye kwifolda apho sigcine khona iphakheji ekhutshelweyo. Xa sifika kuyo Masenze ifayile ekhutshelweyo iphumeze:
Emva komyalelo wangaphambili, sinako qala inkqubo ngokunqakraza kabini kwifayile, okanye sinokwazisa inkqubo ngokuchwetheza kwi-terminal (Ctrl + Alt + T):
Abasebenzisi abafuna ukwazi okungakumbi ngale nkqubo, banako Jonga i Indawo yokugcina kwiGitHub yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » IHarmonoid, isidlali somculo wasekhaya okanye kwiYouTube
ISuperTuxKart 1.3 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
I-Linux 5.15-rc3 ibuyele esiqhelweni, ukuba ikhe yashiywa